Fivadiham-pitokisana Voasambotry ny polisy ilay nitsoaka vidina moto
Efa namidin’ilay mpividy tsy nahaloa vola ilay moto ary efa tsy hita popoka. Lehilahy 55 taona no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny Boriborintany faha-3 teny amin’ny faritra Andravoahangy, afak’omaly talata 23 jolay noho ny antony fivadiham-pitokisana.
Raha ny fantatra dia lehilahy 2 no nifanaraka hanao fifampivarotana moto ny volana martsa 2018. Nifanarahana fa 1.000.000 ariary no vidin’ny moto ary haloa in-3 miantoana . Tamin’io fotoana io dia efa nandoa vola 300.000 ariary ilay mpividy ary dia nentiny ilay moto. Taorian’izay anefa dia tsy nandoa vola intsony araka ny fifanarahana izy, ary nanomboka tsy azo antso amin’ny finday intsony ka niafara tamin’ny fanjavonany mihitsy taty aoriana. Nametraka fitarainana ilay tompona moto. Nanao ny fanadihadiana ny polisy ka dia voasambotra teny Andravoahangy ilay lehilahy nividy ilay moto ny talata 23 jolay io. Nandritra ny fanadihadiana azy dia niaiky ny helony ity farany.